Mobiles China kacha mma maka ihe na -erughị 100 euro - Septemba 2021 | Androidsis
Egwuregwu ndị China kachasị mma maka ihe na-erughị 100 euro
Jose Alfocea | | China gam akporo, Noticias
N'ihe banyere ịgbanwe ekwentị anyị na ịzụta ekwentị ọhụrụ, enwere ọtụtụ akụkụ nke anyị ga-eleba anya ma nyochaa, site nha na ogo ihuenyo na nchekwa dị n'ime iji chekwaa foto na vidiyo anyị niile, ogo nke igwefoto gị ma ọ bụ ike batrị, iji nọrọ ụbọchị niile na-achọ plọg dị ka onye nzuzu. Otú ọ dị, ihe ga-ekpebi nnweta anyị ga-abụ mmefu ego nke anyị nwere.
Maka nke a, ọ bụrụ na ị na-eche maka imegharị ekwentị ochie gị yana enweghị ike ma ọ bụ na ịchọrọ ịmebe akpa gị, mgbe ahụ ị bịarutere ebe kachasị mma n'ihi na taa na Androidsis anyị ga-enye gị ezigbo nhọrọ na ihe kacha mma China na-erughị euro 100.
1 Ngwaahịa kachasị mma nke China, na ọnụahịa kacha mma
2 Onu ogugu nke 10 kacha mma nke China na-erughị euro 100
2.2 Ntụle Cubot S
2.4 ZTE Agụba L5 Plus
2.9 Landvo XM100 gbakwunyere
3 Kedu ihe m kwesịrị ile anya mgbe m na-ahọrọ mobile ọhụrụ?
Ngwaahịa kachasị mma nke China, na ọnụahịa kacha mma
Taa na Androidsis anyị kpebiri igosi nke ahụ ị nwere ike ịnweta ezigbo ekwentị mkpanaaka na-ahapụghị ụgwọ ọnwa n'ime. Ọtụtụ na-eche na ekwentị ndị China adịghị mma, adịghị mma na ha ga-emebi n'oge na-adịghị anya, agbanyeghị, enwere ihe niile, dịka ebe niile, ma ọ bụrụ na anyị echee echiche nke ọma banyere ya, ebee ka imirikiti ekwentị ndị dị n'ahịa rụpụtara, site na nke kachasị ọnụ na nke dị ọnụ ala?
Maka nke a, ekwentị niile anyị ga - egosi gị taa ga - agbaso njirisi atọ dị mkpa:
Emere ha na China. Ee, dịka iPhone, Galaxy S8 na ọtụtụ ndị ọzọ dị oke ọnụ.
Ha na-efu ihe na-erughị 100 euroAgbanyeghị na iburu n'uche na ọnụahịa na-adịgasị iche iche nke ukwuu n'oge ụfọdụ, ụfọdụ ụdị a na-akwụ ntakịrị karịa.
Ha dị mma, nke ahụ bụ, ha nwere ike ọ gaghị abụ ndị kachasị mma n'ahịa, mana ha bụ igwe eji agagharị agagharị, nwere uru dị mma maka ego, yana nke ị nwere ike iji gee egwu, sọfụ ịntanetị, kpọọ ma nata oku, zipu ozi ederede, ozi ịntanetị , jiri WhatsApp, Telegram ... Bịa, ị nwere ike ịme ihe niile ị na-eme ugbu a na ekwentị gị.
Onu ogugu nke 10 kacha mma nke China na-erughị euro 100
Ma ugbu a na ịmara ihe ọkwa a gbasara, ka anyị gaa na nhọrọ a magburu onwe ya.
Ọ bụghị ekwentị James Bond, mana Ulefone U007 Ọ bụ otu n'ime ngwaahịa China kachasị mma ma dịkwa ọnụ ala ị ga - ahụ, site na 45 euro. Abịa na 5 nke anụ ọhịa ahụ HD ihuenyos nwere pikselụ 1280 x 720 mkpebi, 8 megapixel igwefoto isis, 8 GB nke nchekwa arụ ọrụ n'ime kaadi microSD, Android 6.0 Marshmallow ma jiri naanị 136 gram. Na mgbakwunye, azụ bụ extra-pole na ọ bụ ezie na ọ bụ nke plastik, ọ na-eitomi brushes nke aluminom nke ọma.
Ntụle Cubot S
Ọ bụ ezie na ọ kabeghị aha a ma ama, Cub emeela ọkwa na nke a Ntụle Cubot S, smartphone na-abịakwute anyị 5,5 inch IPS HD ihuenyo na mkpebi nke Pikselụ 1280 x 720. Ka ọ dịgodị, n'ime anyị na-ahụ 6580 GHz quad-isi MediaTek MT1,3 processor yana Mali-400 MP2 ndịna GPU, tinyere 2 GB nke Ram na 16 GB nke ROM (gbasaa na kaadi microSD ruo 64 GB). Na mgbakwunye, ọ gụnyere GPS, Bluetooth 4.0, sim abụọ, Igwefoto buru ibu 5 megapixel na-ada flash, 2 megapixel n'ihu na sistemụ Gam akporo 6.0 Marsmallow. Na ya niile maka ihe dị ka euro 82.
Ọzọkwa ọkụ si China abịa a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. Maka ọnụ ahịa ihe dị ka euro 75, ọnụ ahịa. Ya isi atụmatụ na-agụnye a 5 nke anụ ọhịa ahụ HD ihuenyo na mkpebi nke pikselụ 1280 x 720, ebe n'ime anyị na-ahụ 6735GHz quad-core A53 MT1.0 processor esonyere 2 GB nke RAM y Ntọala nchekwa 16 GB gbasaa site na kaadi microSD.
Dị ka sistemụ arụmọrụ, Doogee a na-abịa Gam akporo 6.0 Marsmallow, pụta ìhè akpan akpan ya 2.400 mAh batrị.
ZTE Agụba L5 Plus
Ndepụta a na-aga n’ihu ma anyị si na ekwentị China wee mara nke ọma na West. Anyị pụtara ZTE na ya ZTE Agụba L5 Plus, na ọnụ na p5 nke anụ ọhịa ahụ HD ihuenyo na mkpebi 1280 x 720 n'ime nke na-ezobe a MediaTek MTK6580 nhazi 1.3 GHz quad-isi tinyere 1 GB nke RAM y Ntọala nchekwa 8 GB na anyị nwere ike ịgbasa site na iji kaadi microSD nke ruru 32 GB. Na isi igwefoto bụ megapixels 8, ọ nwere ọrụ SIM abụọ na batrị bụ 2.150 mAh. Ọnụ ya dịkwa n'okpuru euro 70.
Ọzọkwa n'okpuru 70 euro bụ nke a Lenovo Moto B na, dika nke mbu, nwere nkwado nke ugwu nke onye meputara ya.
Ama a na-enye a 4,5 inch ihuenyos HD nwere mkpebi 720 x 1280. Ọ bụrụ na ihe masịrị gị bụ nha a, o doro anya na ọ bụ otu n'ime ihuenyo kachasị mma ị ga-ahụ n'okpuru otu narị euro.
Na mgbakwunye, ọ nwere Quad-isi MediaTek processor na Mali T720 MP1 ndịna-arụkọ ọrụ ọnụ, 1 GB nke RAM, 8 GB nke nchekwa esịtidem expandable na-abịa na A gam akporo 6.0 Marshmallow. Ghara ikwu banyere ndụ batrị, nke na-adịgide ụbọchị niile, yabụ ọ nwere ike ịnọnyere gị.
Ọ dị mma na njedebe ọnụahịa anyị ji aka anyị tinye bụ nke a 16GB Koobee dị ọnụ na .99,99 XNUMX n'oge a na-ede post a. Ọ bụ ọnụ ya na 5 nke anụ ọhịa ahụ HD IPS ihuenyo nwere mkpebi nke pikselụ 1280 x 720 nke na-agba n'ime Android 6.0 Marshmallow site na a MediaTek MTK6735 nhazi 1.3GHz quad-isi esonyere Nchekwa 2 GB Ram y 16 GB nke nchekwa dị n'ime nke anyị nwere ike ịgbasa site na iji kaadi microSD.
Ekwentị a na-egosipụtakwa ahụ ya na igwe c13 MP, f / 2.2, 27mm isi igwefoto na autofocus, mgbe igwefoto dị n'ihu bụ 5 MP. Ọzọkwa, ọ nwere njikọ 4G.
Naanị 60 euro anyị nwere ike ịnweta nke a THL T9, bụkwa otu n'ime ngwaahịa China kachasị mma maka ihe na-erughị 100 euro maka uru maka ego.
N'etiti njirimara ya bụ isi anyị nwere ike ịkọwapụta a 5,5 nke anụ ọhịa ahụ HD ihuenyo na mkpebi 1280 x 720 pikselụ, MediaTek nhazi MT6737 1.3GHz quad-isi esonyere 1 GB nke RAM y 8GB ROM gbasaa.
Ọ na-abịakwute anyị Android 6.0 Marshmallow, GPS, Bluetooth 4.0, Dual SIM, 5 megapixel isi igwefoto na-elekwasị anya na akpaaka, 2 megapixel n'ihu igwefoto na ike 3.000 mAh batrị itu ya na ubochi dum.
Site n'ụlọ Motorola - Lenovo anyị nwere ọmarịcha ihe a 3 Moto E2016 na maka naanị 89 euro na-enye anyị a 5 anụ ọhịa ahụ nwere mkpebi 720 x 1280 pikselụ na a Snapdragon 410 processor clocked na 1.4 GHz esonyere 1 GB nke RAM y 8 GB nke nchekwa Esịtidem expandable site micro SD kaadị.
Dị ka sistemụ gụnyere Android 6.0 Marshmallow na video na foto ngalaba anyị na-ahụ a 8 megapixel igwefoto isi na autofocus na ihu ọzọ nke 5 megapixels, na mgbakwunye na Njikọ 4G.
Landvo XM100 gbakwunyere
Ama m! Akara a amaghi ama nye ọnụ ọgụgụ anyị niile, agbanyeghị, nke a apụtaghị na anyị enweghị ike ịnọ n'ihu otu igwe ekwentị China kachasị mma maka ihe na-erughị 100 euro. N'ebe ọwụwa anyanwụ Landvo XM100 gbakwunyere dị na agba atọ maka naanị iri isii euro ma nye anyị a 5,5 nke anụ ọhịa ahụ HD ihuenyo ya na mkpebi pikselụ 1280 x 720 na a MediaTek nhazi MT6580A quad-isi soro Mali 400P GPU, 2 GB nke RAM y 16 GB nke nchekwa Esịtidem expandable site na kaadi microSD ruo 32GB.
Ọ na-agụnye nkwado maka sọrọ sim, 8 MP igwefoto isi, 2 MP n'ihu, GPS na 2.200 mAh batrị.
Anyị na-ejedebe ọzọ nke ọnụ ala dị ọnụ ala, nke a Gretel a7 con 4,7 ″ ihuenyo na mkpebi 1280 x 720, MediaTek MTK6580A nhazi quad-isi 1.3 GHz, 8 MP igwefoto isi na-akpaghị aka na-elekwasị anya, 1 GB nke RAM, 16GB ROM, Gam akporo 6.0 Marsmallow, Bluetooth 4.0, GPS ...
Kedu ihe m kwesịrị ile anya mgbe m na-ahọrọ mobile ọhụrụ?
Nke a bụ ajụjụ nde dollar, ọbụlagodi ugbu a na e nwere ọtụtụ ụdị, nke ọtụtụ ụdị na ọnụ ahịa dị iche iche. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i jiri nlezianya hụ nhọrọ nke ihe kacha mma China na-erughị euro 100 N'elu, ị ga-ahụrịrị ọtụtụ usoro ihe dị mkpa nke anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe niile:
Ọnụahịa ahụ, mana ọnụahịa ahụ ghọtara mmefu ego, dị ka njedebe nke ihe anyị nwere ike ma ọ bụ chọọ imefu. Cheta na onu ahia di elu abughi mgbe ozo dika ihe di elu.
Garantía. Imirikiti ekwentị ndị anyị gosipụtara anyị nwere ike zụrụ na Amazon, nke ahụ na-echekwa nche mgbe niile. I nwekwara ike chọọ na ụlọ ahịa ndị na-arụ ọrụ na Spain (ma ọ bụ na obodo gị) iji nwee obi ụtọ akwụkwọ ikike afọ abụọ nke iwu Europe chọrọ. Cheta na ọ bụrụ n'ịzụrụ na mpụga EU, iwu EU anaghị emetụta.
Ihuenyo na ogo. You na-ahọrọ obere ma nwee ike ịchịkwa ihuenyo ma ọ bụ na-amasị gị ikiri vidiyo na YouTube na usoro na Netflix site na ama gị?
Ike na arụmọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwa ọdịnala (WhatsApp, Twitter, sọọfụ ịntanetị, wdg) ị gaghị echegbu onwe gị, mana ọ bụrụ na ị na-egwu egwuregwu na eserese "egwu", mgbe ahụ ị kwesịrị ịkpachara anya.
Nchekwa. Cheta ịhọrọ igwe eji eji nchekwa zuru ezu maka ngwa ahụ; ndi ozo (egwu, vidiyo ...) enwere ike ichekwa na kaadi ebe nchekwa.
Onwe yaNke ahụ bụ, gbaa mbọ hụ na ekwentị mkpanaaka gị nwere batrị dị mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọrọ ọtụtụ oge pụọ n'ụlọ.
Na ngwụcha, gbalịa ka mgbasa ozi ghara iduzi gị, echefula na ekwentị kachasị mma maka gị ga-abụ nke ga-emezu atụmanya gị na mkpa gị, ọ bụghị nke mụ ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ ga-agwa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » China gam akporo » Egwuregwu ndị China kachasị mma maka ihe na-erughị 100 euro
onye ọ bụla ọzọ hụrụ n'anya dị ka m na-eme
Nwa nwoke nkịtị dijo
Ee e mba. Enwere ndị ka mma ma dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ịchọọ na weebụsaịtị ndị China
Zaghachi onye ozo
Ndewo "Nwa nwoke nkịtị". N'ezie ọ bụ eziokwu na enwere ekwentị ndị dị ọnụ ala karịa mana, dị ka ị na-ekwu, "ọ bụrụ na ịchọọ na weebụsaịtị ndị China." Ebumnuche nke nhọrọ a bụ na ị nwekwara nchekwa nke nkwa na-enye gị na ọ bụ ya mere anyị ji tinye telefon dị na Spain (amaghị m ma ọ bụrụ na ị gụọ anyị si ebe a) na onye zụrụ ya, ya mere, ọ dabere n’okpuru afọ abụọ nke iwu European kwadoro. Ugbu a, mkpebi ahụ bụ n'efu maka onye ọ bụla, chekwaa ntakịrị ma enweghị nkwa, ma ọ bụ nọrọ ntakịrị karịa ma nwee nkwa.
Enwere m olileanya na ị na-eleta anyị na nke kachasị, na-ahapụ echiche gị.
InsTube ezigbo nhọrọ iji budata vidiyo YouTube
Sọpụrụ 9 na nsọpụrụ 8 ọ bara uru mgbanwe ahụ?